आज शुक्रबार : लक्ष्मी माताको दिन, उत्पात योग, कस्तो होला राशिफल ? – Gandaki Voice
Home/धर्म/ज्योतिष/आज शुक्रबार : लक्ष्मी माताको दिन, उत्पात योग, कस्तो होला राशिफल ?
आज मिति २०७७ पुस १७ गते शुक्रबार, इस्वीसंवत जनवरी १ तारिख सन् २०२१, श्रीशाके १९४२, नेपाल संवत् ११४१, प्रमादी नामको संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ ।
चान्द्रमान अनुसार पौषकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज पौषकृष्णपक्षको द्धितीय तिथि रहनेछ । आज तिष्य नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा बैवृति, करणमा वणिज, आनन्दादि योगमा उत्पात रहनेछ ।
सूर्य धनु राशिमा, चन्द्रमा कर्कट राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २५ घटि ५५ पला अर्थात १० घण्टा २४ मिनेटको रहनेछ । आज सूर्योदय काठमाडौं केन्द्र विन्दुमा रही बिहान ६ बजेर ५६ मिनेटमा विभिषण मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ५ बजेर १८ मिनेटमा हुनेछ ।
मेषः मेष राशि भएकाहरूका आज पनि समय खराब रहनेछ । आश्वासन पूरा हुन कठिन छ । महत््वाकांक्षा ठूलै भए पनि उपलब्धि हुनलाई ग्रहबाधा देखिएको छ । तथापि धार्मिक-आध्यात्मिक वातावरण एवं चिन्तन मनन् गर्दा राम्रो हुनेछ । सामान्यतया दैनिक रुपमा चलिरहेका व्यवहारिक कार्य आदिबाट लाभ हात पार्न समस्या हुनेछ । उच्च वर्गसँग सम्पर्क स्थापित हुँदा केही महत्वाकांक्षा पनि बढ्न सक्ने छ । जसले मनोबल पनि उच्च बनाउने छ । प्रेमसम्बन्धमा नयाँ पन आउनेछ ।
वृषः वृष राशि भएकाहरूका लागि आज पनि समय शुभ छ । आज प्रतिस्पर्धामा विजय र प्रख्याति मिल्ने दिन छ । पेशा तथा व्यवसायिक कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सकिने छ । अध्ययन-अध्यापन एवं सन्तानबाट पनि सन्तोष लिन सकिने छ । दिनको सदुपयोग गर्ने र अधुरा रहेका कामलाई पूर्णता दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । विवाह योग्य युवायुवतीको विवाह प्रसङ्ग चल्न सक्ने र प्रेमाभिलाषिहरुको लागि प्रेम सम्बन्ध जोडिन सक्ने योग छ । आज माता भुवनेश्वरीको भक्तिभाव राम्रो हुनेछ ।
मीनः मीन राशि भएकाहरूका लागि आज पनि समय खराब नै रहनेछ । दिन प्रतिकूलता बढ्न सक्ने खालको गोचर परेको छ । यात्रा, लेनदेन र नयाँ निर्णय नगर्नुहोला । शारीरिक एवं मानसिकरुपमा सक्षम देखिए पनि विशेष मानिएको कार्य पूरा गर्न संघर्ष गर्नुपर्नेछ । सामान्यतया आरोग्यता र हिम्मत-क्षमता भने बढ्ने छ । दिनमा २ बजेपछि तार्किक क्षमता बढ्ने र प्रतिस्पर्धामा सफलता मिल्नेछ । आज पूर्व दिशाको यात्रा उपयुक्त छैन ।
बिहान ६ः५२ बजेदेखि ८ः१० बजेसम्म चर बेला
बिहान ८ः१० बजेदेखि ९ः२८ बजेसम्म लाभ बेला
बिहान ९ः२८ बजेदेखि १०ः४६ बजेसम्म अमृत बेला
बिहान १०ः४६ बजेदेखि १२ः०५ बजेसम्म काल बेला
बिहान १२ः०५ बजेदेखि १ः२३ बजेसम्म शुभ बेला
दिनमा १ः२३ बजेदेखि २ः४१ बजेसम्म रोग बेला
दिउँसो २ः४१ बजेदेखि ३ः५९ बजेसम्म उद्धेग बेला
दिउँसो ३ः५९ बजेदेखि ५ः१७ बजेसम्म चर बेला